सवारीसाधनले कुन प्रदेशमा कति तिर्नुपर्छ कर ? - बडिमालिका खबर
सवारीसाधन बाहकले सवारी साधनको प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । देश संघीय संरचनामा जानुभन्दा धेरै अघिदेखि यस्तो कर उठाउने व्यवस्था सुरु भएको हो । पहिले नेपाल सरकारले उठाउँदै आएको यो कर अहिले भने प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ६ ले सवारी साधन करलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखेपछि प्रदेशहरुले आफ्नै ढंगबाट करको दर निर्धारण र संकलन गर्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आश्रित आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएका यी करका दरहरुलाई सबै प्रदेशले पारित गरिसकेका छन् । जसअनुसार ती प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएका साना तथा ठूला सवारी साधन सवारी करको दर निर्धारण गरेका छन् । प्रदेशहरुले निर्धारण गरेको त्यस्तो शुल्कमा सवारीसाधनको क्षमता र भारअनुसार कर निर्धारणमा एकरुपता कायम छ । तर त्यस्तो शुल्क एउटै भने छैन ।
कुन प्रदेशमा कति लाग्छ शुल्क ?
समग्रमा सवारी साधन करका लागि यो वर्ष सबैभन्दा उदार भएको प्रदेश सुदूरपश्चिम देखिएको छ । सानादेखि ठूला सवारी साधनमा यो प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश पनि तुलनात्मक रुपमा कम कर उठाउने प्रदेशमै परेका छन् । गण्डकी प्रदेशले मध्यम शुल्क निर्धारण गर्दा प्रदेश १, बागमती र प्रदेश ५ मा तुलनात्मक रुपमा धेरै सवारी साधन शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।राताेपाटीबाट